Khubarro Ogaaday in Cillad Ay Ku Jirto Dhammaan CPU-da computerrada Caalamka Laga isticmaalo WARBIXIN. – Bogga Calamada.com
Khubarro Ogaaday in Cillad Ay Ku Jirto Dhammaan CPU-da computerrada Caalamka Laga isticmaalo WARBIXIN.
Labada ciladooda, waxa lagu kala magacaaba ‘Meltidown’ iyo ‘Spectra’ kuwaasi oo u ogolaanaya qolooyinka Computerada jabsada ee “Hackers-ka” loo yaqaanno in ay xadaan xogta ku keydsan maskaxda Computer-da. Aaladahas oo eey kamid yihiin taleefoonnada, Laaptoobyada iyo Server-da ku shaqeynaya waxa loogu yeero ‘Cloud computer Networks’.
Marka loo yimado xalinta cilidahan soo kordhay, khubarradu waxay qabaan in ‘Spectra’ aan la xalin Karin illaa aaladda CPU qaabka cusub oo kii hore ka duwan loo soo nashqadeeya halka ‘Meltdown’ loo baahanyahay in lagu shubo ‘Software batch-ah’ taasi oo hoos u dhigeysa 30% dhibaata ka imaankarta. Batch Ku shubistu waxay sido kale hoos u dhigeysaa xawaaraha computer-da.
“Xaqiiqatan ciladahani sameyn ayay leeyihiin sidaso kale xalintooduna sameyn kale oo xun ayay leedahay” sidas waxa yiri Paul Kocher cilmibare katirsan machadki so ogaaday cilladahan.
‘Meltdown’ waxa uu si gaar ah dhibaato ugu yahay ‘cloud computer servers’ eey maamulaan sharikadaha sida Amazon, Google iyo Microsoft. Asbuucii lasoo dhaafay Google iyo Microsoft waxay eey sheegen iney servera-dooda u cusbooneysiyeen qaab eey ula tacaamuli karaa cilladahan.
Amazon waxay macamisheeda u sheegtay in cilladahani ka jireen ” ku dhowaad 20 sano” qeybta maskaxda Computer-da. Sido kale waxay u sheegtay in eey iska difaacday dhamman isku dayadi “Amazon web servers”-ka macaamishuna eey iska Update-gareyan Software-ka.
Si looga faa’ideysto ‘Meltdown’ Hackers-ku waxay u baahanyihin iney kireystaan ‘Cloud server-ka’ sida ganacsi caadi ah oo kale, markii eey boos ka helaan server-ka waxa u suurta galeysa iney xadaan xogta iyo Number sireedyada ganacsi yada kale. Laakin waxan surtagal u ahayn hackers-ka iney boos ka kireystaan servera-da.
Taasi waxay baqdin galin weyn ku tahay habka eey u shaqeeyaan ‘Cloud computing servers-ka’ kuwaasi oo xog la wadaaga macaamiil farabadan- madaama aan hal server hal macmiil lasiin Karin. Inkasto nidaamyo iyo qalab farabadan logu talagalay in amaanka lagu sugo hadana cilladahan waxay tuugada u suurta galinayan iney ka wareegsadan ka hortagyadas.
Laptop-yada iyo computer-da eey dadku isticmalan ayaa sidaas oo kale u nugul cilladahan, lakiin Marka hore Hackers-ku waa iney soo galan system-ka, waxaa jira dhowr hab oo eey kusoo gali karaan, iney ugusoo dhuntaan software islamarkaasna uu lasoo dago, in uu furo E-mail ay kusoo dhuunteen sidaasna eey ku galaan computerka iyo habab kale oo lagu gali karo computer-da.
Sida eey cilmibaarayaashu sheegen, ‘Meltdown’ waxa uu inta badan sameya processor-da eey soo saarto shirkada Intel taas oo ka dhigan 90% chip-yada loo isticmaalo server-da aas aaska u ah internet-ka iyo ganacsiyada gaarka looleeyahay.
Macaamiisha Microsoft, Sharikada soo saarta Windows OS, waxay u baahanyihiin iney ku shubtaan Update-ka ka yimada shirkada si eey u xaliyan ciladan. coder-rada dunida oo dhan ku kala faafsan ee hormariya ‘Open source Linux OS’ kasi oo ku shaqeeya 30% server-da caalamka oo dhan yaala waxay horay u soo bandhigeen patch lagu update garenayo. Sharikada Apple, ee soo saarta Mac OS, ayaa qeyb ahan cilad bixisay waxana la rajeynaya iney soo saarto patch kale oo dheerad ah.
Software patches-ka computerrada lagu shubayo waxay hoos u dhigayaan 20-30% xawaraha computer-da, sidaas waxa sheegay Andrew Freund, coder madax banan oo tijaabiyay patch-ka Linux OS.
Inta laga warqabo, ma jiro wax cadeynaya in kooxaha weerarada geysta eey horay uga faa’ideysteen meelahas nugul. Laakin markii la shaaciyo cilladahan isticmalihii aan computerkiisa patch-ka ku shuban wuxuu ku jiraa qatar. Waxa loogu yeero weerarkii ‘Ransomware’ ee sanadkii hore ku dhuftay dunida oo dhan wuxuu sameyay computer-o aan helin patch loogu talagalay cilada windows-ka.
Cilada kale ee, Spectra, waxay sameysaa inta badan processor-da maanta la isticmaalo, inkastoo eey cilmibarayashu aaminsanyihiin iney adagtahay in laga faa’ideysto. Ma jiro ciladbixin sax ah oo ilaa hada loo hayo, mana cada waxa sharikadaha Chip-ka soo sameya sida intel eey ku sifeyn doonan dhibaatadaan.
Ma hubana saameynta eey ku yeelandoonto ganacsiga Intel soo oganshaha dhibaatadaan xaga chip-ka ah. Isbuucii lasoo dhaafay, haldoorka silicon valley(intel), waxa ay hoos u dhigtay dhibaatada ey leeyihiin cilladahani. Bayaan eey so saartay intel waxa lagu sheegay “waxay aaminsantahay in cilladahasi eey san keeneyn cirib dambe o ah iney qaribanto, ama labadalo ama la tirtiro xogta.”
Cilmi barayaashu waxay ogeysiiyeen cilladahan company-ada eey sameyneyso. sida caadada ahba markii dhibaato ceynkas oo kale ah la ogaado, waxa laga fogaada in la shaaciyo si eeysan Hackers-ku uga faa’ideysan ilaa laga xaliylo.
‘Meltdown’ waxay gooni u tahay intel, lakin ‘Spectra’ waa cillad xagga farsamada qaab dhismeedka ah taasi oo eey wadagaan shirkado badan oo chip-ka soo saara isla markaasn tobanan sano soo taagneyd.
waxay si aan la daremeyn u sameysaa processor-da sida AMD, Intel iyo Rambus.
‘Spectra’ wey adkaan doontaa in lala tacaamulo, xalkeedana lama helayo ilaa lasoo saaro jiil cusub chip-ab ah.
‘Meltdown’ waxa markii ugu horeysay soo ogaaday ninka lagu magacaabo “Jann Horn”, qabiir xaga amanka computer-ada ah oo ka tirsan waaxda cilmi baarista ee Google kadibna dhowr qofod o kale ayaa iyaguna soo helay. Cilada kale ee ‘Spectra’ isna isla shaqsigan ayaa la shegay inu soo ogaaday si ka madax banaan waxa isna la sheegay inu soo ogaaday nin lagu magacabo “Kocher” madaxa cilmi baarista Rambus qeybteeda ‘Cryptography Research’.